Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Onye isi ọhụụ nke Explore Minnesota Tourism aha ya bụ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Gọvanọ Minnesota Tim Walz kwupụtara taa na Lauren Bennett McGinty ga-eje ozi dị ka onye isi ọhụrụ nke Explore Minnesota.
Gọvanọ Walz họpụtara Lauren Bennett McGinty ka ọ bụrụ onye isi nke Explore Minnesota Tourism.
Lauren nwere ahụmịhe n'ịre ahịa, nkwukọrịta, arụmọrụ, ego, ile ọbịa, agụmakwụkwọ, na nkwado na enweghị uru dabere na Minnesota.
Ụbọchị mbụ Lauren na Explore Minnesota Tourism bụ Nọvemba 15, 2021.
Gọvanọ Minnesota Tim Walz na Lieutenant Gọvanọ Peggy Flanagan taa kwupụtara nhọpụta nke Lauren Bennett McGinty dị ka onye isi oche Chọpụta njem nlegharị anya Minnesota, dị irè na Nọvemba 15.
Gọvanọ Walz kwuru, "Minnesota bụ otu n'ime ebe ndị njem si n'akụkụ ụwa niile na-aga na-eleba anya na ịma mma eke anyị na obodo ndị dị egwu." "Enwere m mpako ịhọpụta Lauren dị ka onye Nyochaa onye isi njem nlegharị anya Minnesota, ebe ọ ga-eweta ọkachamara ya n'ịzụ ahịa iji tinye ndị bi na anyị aka ma dọta ndị ọbịa na nkà ọhụrụ na steeti anyị."
"Minnesota bụ ebe ịma mma, ihe ọhụrụ, na ohere iji nwee ekele maka obodo anyị dị egwu na ọmarịcha ihe onwunwe," Lieutenant Gọvanọ Flanagan kwuru. "Anyị nwere obi ụtọ na Lauren na-edu Chọpụta njem nlegharị anya Minnesota ma nyere aka hụ na ndị mmadụ sitere na nzụlite na ụdị ndụ niile nwere obi ụtọ ma nabata ha inyocha ọnọdụ anyị na-akpali akpali. "
“Obi dị anyị ụtọ ịnabata Lauren n'ọchịchị gọọmentị steeti. Ọ ga-abụ ezigbo onye ndu maka Explore Minnesota,” Kọmishọna Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ na mmepe akụ na ụba (DEED) kwuru Steve Grove. "Anyị na-atụ anya iso ya na nnukwu ndị otu na Explore Minnesota na-emekọ ihe iji mee ka mgbake akụ na ụba dị maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya pụrụ iche nke Minnesota."
“Enwere m ihe ùgwù ịrụ ọrụ a dị mkpa ka ụlọ ọrụ nlegharị anya anyị na-aga n'ihu na-agbapụ n'ọrịa a. Ka anyị na-eche ihe ịma aka ihu n'ụzọ anyị iji nweta ihe ọhụrụ, anyị kwesịrị ịchọta ụzọ okike iji tinye aka na ndị njem intra na steeti, "Lauren Bennett McGinty kwuru. "Ekwere m ịge ntị mkpa nke ndị mmekọ njem nlegharị anya n'ofe Minnesota iji wepụta ọbịa ọbịa kacha mma na mba ahụ ma nyere ndị njem aka ịchọpụta ahụmahụ pụrụ iche dị na steeti anyị dị ukwuu."